အလန်းမယား ၏ခေါ်ဆောင်ရာ – Grab Love Story
Black taxi ၂စီးထောင်ထားတာ  မောင်းတဲ့ကလေးက မလာ. အော်ဒါကလည်းမဖြစ်မနေသွားရမှာဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲကားထုတ်ပြီး မှာထားတဲ့ ရုံးရှေ့မနက်စောစော သွားထိုးပေးထားလိူက်သည်. ခပ်သေးသေးခပ်သွယ်သွယ်မိန်းခလေးတယောက် ဆင်းလာပြီး  ကားပေါ်တက်ထိုင်သည်။ ရန်ကုန်  နေပြည်တော်ခရီး  နေ့ခြင်းပြန်  ပျင်းစရာတော့ဖြစ်မည်။ကျွန်တော်က  ကားမောင်း  သူမက  နောက်ကထိုင်ရင်း  သူမ တလမ်းလုံးဖုန်းပြောလိုက်  ပရိတ်ရွက်လိုက် ပုတီးစိပ်လိုက်  စကားမပြောဖြစ်ကြ။
၁၁၅ မိုင် Bereak fast စားသည်။ သူမ အိမ်ထောင်ရှိကြောင်း ကလေးနှစ်ယောက်ရှိကြောင်း ယခုအလုပ်အတွက်နေပြည်တော်ကို ၆ခေါက် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း အလုပ်မတွင်ကြောင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရအောင် ယခုတခေါက် ပြီးပြတ်အောင်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက သိန်း ၃၀ ပေးလိုက်ကြောင်း ငွေပေးပြီး ကိစ္စပြတ်အောင် လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း……..ကရားရေလွှတ်တွတ်တွတ်…
ဒီလိုနဲ့နေပြည်တော်ရောက် သူမသွားမဲ့ရုံးလိုက်ပို့ သူမ၏ရုံးအိပ်ဝိုင်းသယ် ပေးရင်း အဲ့ဒိရုံးအ၀င်ခွင့်ပြုမိန်ပေးမဲ့သူ သူမနဲ့စကားပြောရမဲ့သူက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း…အရင်းခေါက်ခေါက်.. အတိုချုံးရရင် သူမ သိန်း၃၀ မကူန်ပဲ ရုံးဆင်ချိန် ညနေ၅နာရီမှာ ခွင့်ပြုမိန်ရပြီ..သူမပျော်နေတာမြင်ရတော့ ကျွန်တော်ပါ ပိတီဖြစ်။ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လက်လာကိုင်ပြီးးခနခနပြောသည်
နေပြည်တော်က အပြန် ၁၁၅ မိုင်။ သူမက အရက်သောက်မလား မေးသည်။ မူးလျှင် သွေးဆိုးတတ်ကြောင်း ကျွန်တော်ကပြောတော့ သူမပြုံးရင်း နည်းတည်းတော့ဆိုး ဘေးလူသွားမဆိုးနဲ့ပြောသည်။ အရက်ကောင်း ၂ပက်တခွက် စမှာရင်း ရေခဲတုံးလေးတွေလှုပ်ရင်း သူမကို မသိမသာကြည့်မိသည်. ဖြူဖြူ သာမန်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ဘာမှမထူးခြား နှုတ်ခမ်း အနည်းငယ်ဖူးသည်။အပြင်ပန်းအမြင်အရ အနေအထိုင် ကျစ်လစ်ပုံရသည်။မိန်ူမတယောက် ပျော်နေလျှင် အလိုလိုကြည့်ကောင်းနေသလို..ယခုလည်း သူမပျော်နေသည်။
သူမကိုပေးလိုက်သော ငွေ ပြန်အပ်ရမလားအကြံတောင်းသည်။အလုပ်ပြီးပြီဖြစ်၍ မအပ်ဖို့အကြံပေးတော့ သူမ ပိုပျော်သွားသည်။ သိန်း၃၀ သည် သူမ ၄လစာဖြစ်
ကြောင်း ပြောသည်။ပျော်နေ၍သူမသောက်လျှင် အထင်သေးမလားမေးသည်။ကျွန်တော်က သွေးမဆိုးဖို့ နောက်ပြောင်ရင်း တခွက်မှာပေးလိုက်သည်။
ဒုတိယတခွက်စီသောက်ပြီးချိန် သူမ မျက်နှာနီလာပြီ။
လမ်းရောက်တော့ ကားရပ်ခိုင်းပြီး အန်သည်။
နှိပ်ပေးးရသည်..သူ မ အန်နေရင်း မိမိခါးကိုကိုင်ပြီး လက်ဖြင့် တချက်ညှစ်သည်။သူမကိူကြည့်လိုက်ချိန် သူမ မပွင့်တပွင့်ပြုံးရင်းညီမက အထန်မယား ပါဟုပြောသည်။
ညဦးအချိန် နေပြည်တော်ဟိုင်းဝေးလမ်းမဘေး ကားနောက်ခန်း မှာ သူမ၏ တစ်ဝက်တစ်ပျက်အလှကို ကျွန်တော် မျှဝေခံစားခွင့်ရခဲ့သည်။ သူမအပြောနှင့်အလုပ် ညီပါသည်။ စိတ်ခံစားးမှုပြင်ထန်သောအထန်မယားတယောက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ဖိကိုက်တတ်သော ကုတ်ဖဲ့တတ်သော ၀မ်းတွင်းသံဖြင့်ညည်းတတ်သော အာခေါင်သံဖြင့် အော်တတ်သောသူမသည် ကျွန်တော့အား တချိန်လုံးအပေါ်စီးမှ ဦးဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့ပါးစပ်ဝသို့ သူမရင်သားတေ့တေ့ပေးခြင်သည် သူမ၏အတတ်ပညာတခု ဖြစ်ပါသည်။ မကြီးလွန်းမငယ်လွန်းသောကျွန်တော့ဟာ နှင့် သေးငယ်သော သူမ၏ပိပိလေးတို့သည် နာရီနှင့်ချီ ထိတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကားအတွင်းခန်းတခုလုံး အနံ့လေးတွေလှိုင်လှိုင်ထနေသည်။
သူမ ၃ ခါလောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အော်ရင်း ပြီးသွားမှ
ကျွန်တော် လက်စသိမ်းခဲ့သည်။ အလွန်ချိုမြိန်လှပါသည်။ သူမသည် ချိုချိုသေးသေး နှင့် ပိပိးသေးသေးပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တကယ့်အထန်မယားအစစ်တယောက်ဖြစ်သည်။ အမြင်အရ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပုံရသော်လည်း သူမ၏စိတ်လွှတ်ပေးလိုက် ပြင်ထန်သောတုန့်ပြန်မှုများဖြင့် တစ်ဖက်သားကို အမြင့်ဆုံးအထွဋ်အထိပ်ပို့ရင်း သူမလိုခြင်တာလည်း ရအောင် ယူသွားတတ်သူဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေ့က သူမ အလုပ်ဆီက အကျိုးအမြတ်ရော ကျွန်တော့ဆီက အရသာရော ရယူသွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း အထန်မယား တယောက်၏ ခေါ်ဆောင်ရာနောက် တစ်ကိုယ်လုံးအသွေးအသားတွေ ဆူပွက်ရင်း မျောပါခဲ့ရသည်။တကယ့် ကာမသုခဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်နာမည်မမေး.. ကျွန်တော့ဖုန်းနံပါတ် မတောင်း..